Ukuvutha emoyeni emehlweni: izimbangela kanye nokwelapha. Yini okufanele ngiyenze uma amehlo ami eshisa?
Amehlo okushisa: izimbangela kanye nokwelapha
Izimbangela ezivame ukushisa amehlo nezindlela zokwelapha.
Ukuvutha emehlweni akuvamile. Kwezinye izimo, ungayilahla nje ngokuphumula kancane, kanti abanye badinga ukungenelela kwezokwelapha. Into esemqoka ukucacisa imbangela ngesikhathi futhi uhlole ukungathí sina kwenkinga. Kodwa njengoba kungenziwa kuphela udokotela, sincoma ukubonisana nganoma yikuphi ukukhathazeka.
Kodwa endleleni eya kudokotela, cabanga ngalokho okungabangela ukusabela okunjalo ngeso. Ukwakhiwa kwezinyembezi kungathinta izizathu ezihlukahlukene, futhi sihlela ukukutshela ngokujwayelekile kwabo.
Amehlo okushisa: izimbangela
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi kaningi imbangela yokushisa emehlweni kuyisisulu noma ukutheleleka. Kodwa ake sithole konke ngokuhlelekile.
Ngokuvamile ukuvutha emehlweni kungaba umphumela wezifo zokuphefumula. Liyigciwane, futhi lidinga ukwelashwa kwe-anti-virus, okungukuthi udokotela kuphela ongayichaza. Iqiniso lokuthi unesifo singasifunda ezimpawu. Ngaphezu kokushisa, uzophazanyiswa yi-lachrymation nokubomvu. Ezimweni ezingakunaki kakhulu, ukukhishwa kwe-purulent kuvela emagumbini wamehlo.
Ukuvutha kuvame ukuvela ngenxa yokulimala. Eso lingathola isitshalo sesihlabathi noma amakhemikhali asekhaya. Uzokhathazeka ngokushisa nokucasula. Uma uhlanza indlu futhi wangena esweni i-detergent, ungathola ukushisa. Uzoba nobuhlungu obunzima futhi kubaluleke kakhulu ukufuna usizo ngokushesha.
Uma ujwayele ukuphendula okweqile ukuzwa okuvuthayo emehlweni akho akuyona into enhle. Kungenzeka ngenxa yokuxhumana namafutha athile, ukudla noma imithi. Ukuvutha ngokuvamile kuhambisana ne-eyelidi i-edema, ikhanda lokukhanda, ukushisa okukhulu nokukhwehlela. Uma uqinisekile ukuthi ukushisa kwenzeka ngenxa yokungabi namagciwane, thatha iphilisi bese ulinda kancane.
I-eye ye-eye syndrome
Ukuvutha kuvame ukubangelwa ukuma emehlweni, okungabangela ukugula noma ukucindezeleka isikhathi eside emehlweni. Ukuze ususe lesi senzo esingathandeki, sebenzisa amaconsi okuphuza amanzi. Kodwa ngaphambi kokuba ugijimele ekhemisi, buza udokotela, ngoba isizathu singaba sijulile.
Amehlo okushisa: ukwelashwa
Nalapha, sikhathalela isidingo sokufinyelela ngesikhathi esifanele kudokotela. Kungemva kokuhlolwa ngokucophelela angancoma ukwelashwa okunempilo. Ukushisa emehlweni kubonakala sengathi kuyinkinga evamile, kodwa uma ungasabeleli ngokuhamba kwesikhathi, kungabangela ukuthuthukiswa kwesifo esibi.
Kodwa namanje kunezindlela eziningana zokunciphisa isimo sakho ngokwakho:
Blink kaningi. Lokhu kuzosiza ukubanika izinyembezi ezingaphezulu ukuze bahambise i-eyeball.
Phuza amanzi amaningi.
Uma usebenza kukhompyutheni, ngokuvamile uphumule futhi usebenzise umzimba.
Ngaso sonke isikhathi kusihlwa, yenza ukucindezelwa kwamagciwane we-herbal decoctions, okungcono kunawo onke ama-chamomile.
Yilalela umzimba wakho futhi usabele ngesikhathi kuzo zonke izibonakaliso ezingavamile.
Indlela yokufaka kahle kahle emthonjeni
Yehlisa isisindo emsebenzini: 6 Izindlela ezingavamile zokunciphisa isisindo ngaphandle kokushiya iHhovisi
Izimo zokudala ubuhlobo obuhle phakathi kwesiguli nodokotela
Ukungabi namalungelo kubesifazane, incazelo
Izindlela zokuxoshwa nokuxoshwa kwamagciwane ezivela emzimbeni
Ikhekhe le-Buckwheat nge-cottage shizi
Ikhalenda lokukhulelwa: amaviki angu-19
Ukudla okusheshayo kwamadoda
I-Pepper eyayigcwele i-curd
U-Anna Banshikova wazala ingane
Umbhangqwana othakazelisayo: inhlanganisela enhle kunazo zonke ze-Skirt + amabhuzu
Indlela yokuphatha ubuso bakho nsuku zonke
Izifo zezinhlanzi ze-aquarium
Izilinganiso zamadoda: ukuhambisana nezinye izimpawu ze-zodiac
Ukuqapha i-vivacity: kanjani ukugcina ikhofi ekhaya?